Iikhosi zeTekhnoloji zeTCDD Vula | RayHaber
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraIikhosi zeTekhnoloji zeTCDD ziya kuvulwa kwakhona
16 / 11 / 2019 06 Ankara, Ummandla waseMntla Anatolia, Imisebenzi, railway, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
I-tcdd iikhosi zoomatshini ziya kuvulwa kwakhona
Iikhosi zeTekhnoloji zeTCDD ziya kuvulwa kwakhona; I-21 ngoFebruwari Kukho imfuno ephezulu yokuvulwa kwakhona kwekhosi yoomatshini ehlelwe liCandelo Jikelele leTCDD Transportation Inc. evulwe ngoFebruwari 2018 kwaye ukuvulwa kwekhosi ekuqaleni kwe-2020 ikwi-ajenda.
Ngokolwazi olufunyenwe kwi-TCDD Taşımacılık AŞ, ngenxa yoololiwe abatsha abasandula ukuthengwa, kukho isidingo sokuba oomatshini be-YHT baqeqeshekile. Ukongeza, ngenxa yemfuno ephezulu yoololiwe bendawo, isidingo sokuthenga oomatshini siyanda. Ukuze uhlangabezane nale mfuno, i-TCDD yezoThutho Inc. icwangcisa ukuvula iikhosi zoomatshini kwakhona ekuqaleni kwe2020. Iimeko zokuthatha ithuba lekhosi yokulinganisa, apho iikhompyuter zoqeqesho ziya kuba khona kunye nemihla yezifundo iya kwaziswa kamva.
Injineli inoxanduva lokuqinisekisa ukuba abakhweli kunye nololiwe ohamba ngemithambo bahamba ngexesha kwaye bahamba ngokukhuselekileyo.
Ngaba iMbandela yokuNgqinisisa iMachinist ibandakanya ntoni?
● Ukwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko ukuba ukungasebenzi kakuhle kwenzeka ngexesha lohambo, kunye nokukhupha umthwalo okanye umkhweli ukuba awunakulungiswa.
● ndikwanikezela ingxelo ngayo nayiphi na intsilelo ngexesha lomkhankaso,
●zera Ukuqinisekisa ukufudumeza koololiwe ngexesha lamaxesha ebandayo,
Ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zokhuseleko koololiwe ziyasebenza,
●zera Ukuqinisekisa ulondolozo olufanelekileyo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zezandla,
●zera Ukuqinisekisa ukuba yonke imigangatho yesixhobo iyahambelana neenkcazo kuhambo lwangoku nolandelayo,
● I-Vilas kufuneka ihambelane neenkqubo zokhuseleko ngokunxiba izixhobo ezifanelekileyo zokhuselo lomntu, njengokuva nokukhusela amehlo,
●atar Nika ingqalelo ukugcinwa kwamandla.
Ungaba Njani noomatshini?
●zerail Ukuze ube ngumatshini wokuchwephesha, iiyunivesithi ziyafuneka ukuba ziphumelele kwelinye lamasebe aNxulumene neTekhnoloji ye-Elektroniki, oomatshini, oomatshini beendlela zoMatshini, ooMatshini beendlela zoLoliwe ● I-teknoloji ye-Elektroniki yoMbane, iTekhnoloji yoMatshini woLoliwe, iTekhnoloji yeZithuthi. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), abantu abafuna ukuthatha inxaxheba kufuneka ukuba bathathe inxaxheba kwiinkqubo zoqeqesho-nkonzo. Abo bafuna ukuthatha inxaxheba kuqeqesho kulindeleke ukuba bahlangabezane nezi mfuno zilandelayo;
I-●zera engagqithiyo kubudala be-35,
● isidanga esiDlulileyo kumasebe ahambelana nawo,
● Uviwo lweKhetho lokuSebenza lwaBasebenzi boLuntu ukuze ufumane i-93 kunye namanqaku angaphezulu kwi-P60 (Dibanisa umdibaniso),
Iimpawu zempilo kunye nokuva okunempilo,
● Akukho xanduva lasemkhosini kubagqatswa abangamadoda; bayigqibile inkonzo yasemkhosini, banqunyanyisiwe okanye bakhululwa kwinkonzo yasemkhosini.
Zeziphi iimfanelo ezifunwa ngabaqeshi kumatshini oomatshini?
Akukho nto iphosakeleyo kweliso ethintela umahluko wemibala,
●zera Ukungabinangxaki zokuva,
I-●ayisi Kukuba nolwazi lwetekhnoloji yokuqonda ukusetyenziswa kwezixhobo zombane, izixhobo kunye nezixhobo zokulinganisa,
●zera Ukubonisa amandla omzimba okuma okanye ukuhamba ngokuqhubekayo,
Ukuthatha isigqibo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo
INqanaba lokuDlulela kwiNqanaba
UVeysi Kurt: "Ubugcisa bobuqhetseba bunzima kwaye buyingcwele"
UMakinistat uyingcali kwaye ungcwele
Ukwazisa umqhubi we-Driver Course ku-Erzincan
I-Beach yeVan Lake i-Iskele iya kuVulwa kwakhona koLuntu!
TCDD 3. I-Post-Restructuring Meeting kwiNgingqi
Umphathi Jikelele we-TCDD uApaydın, uMongameli we-UIC kwakhona…
Kwi-Sivas, i-TCDD Lodging izakusetyenziswa kwimisebenzi yorhwebo
I-CHP GÜRER, i-TCDD kuninzi ekufuneka kwenziwe
Kuya kwenziwa njani ukuba kuqashwe i-TCDD kunye ne-KGM?
Isikhululo sikaloliwe we-TCDD isikhululo samabanga aphantsi eNazilli
Ukuze agqithise ekwakhiweni eBozüyük '